Madaxweynaha Koonfur Afrika oo qalbiga u dejiyey Soomaalida ku nool dalkiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Koonfur Afrika oo qalbiga u dejiyey Soomaalida ku nool dalkiisa
25th April 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, Jacob Zuma ayaa kulan la qaatay wakiilo ka socday Jaaliyadaha dadka aajaanibta ah ee ku nool dalkaas, kuwaasoo Soomaalidu ay ka mid yihiin.
Kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro iyo wasiiyo ku xigeenno iyo sharci yaqaano ka socday dowladda Koonfur Afrika ayaa ahaa mid ku saabsan sidii madaxweynuhu uu dadka ajaanibta ah uga dhgeysan lahaa dhibaatada ku heysata dalka Koonfur Afrika.
Dadka ajaanibta ayaa u sheegay madaxweyne Jacob Zuma iney heysato dhibaato xagga sharciga ah iyo booliska oo aan difaacin marka dhiibato ku dhacdo ama xitaa aan dacwadhooda wax kasoo qaadin.
Ajaanibta ayaa ku cawday in sharciyada la siiyo aysan aheyn kuwa u keysiin kara muwaadiniinta kale ee Koonfur Afrika, taasina keentay iney la kulmaan weeraro ajnabi nacreyb ku saleysan.
Madaxweynaha oo la hadlay Soomaalidii ka qeybgalay kulanka ayaa ka sheekeeyey xilli uu joogi jiray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waqtigaasoo dalkiisa uu ka jiray medab kala sooc oo cadaankuna xukunka hayeen.
Sida uu BBC u sheegay, Maxamed Axmed Shuuriye oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika oo kulanka ka qeybgalay, madaxweyne Jacob Zuma ayaa u sheegay Soomaalida in dalkiisu yahay dalkoodii oo kale.
“Haddii aad burburriseen dalkiinii qurxanaa, halkaan ku noolaada, wax dhibaata ahna hala imaanina” ayuu yiri madaxweyne Jacob Zuma.
Madaxweynaha Koonfur Afrika iyo wasiiradii la joogay ayaa ajaanibta u ballanqaaday in wax laga qaban doono dhibaatooyinka heysta ee ay kala kulmaan xagga sharciyada, booliska, kooxaha ajnabiga neceb iyo kooxaha burcadda.
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalooyin ka mid ah dalka Koonfur Afrika ka dhacay weeraro bahalnimo oo lagu xasuuqay ajaanib fara badan, inkastoo Soomaalidu ay dhibkaas ka badbaadeen.
Mareykanka: Nin Somali ah oo u hanjabay FPI oo la xiray
Haweenay guri ku heshay cambe ay ku tuurtay madaxwaynaha Venezuela